साहित्य,समाजसेवा हुँदै चिकित्सा क्षेत्र::Best News Experience from Nepal
डा. मञ्जली कुमारी यादव ,स्त्री रोग विशेषज्ञ
पुर्वी नेपालका ग्रामीण समुदायमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दैै आउनु भएकी डा.मन्जली कुमारी यादव एक सफल स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनु हुन्छ । रुपन्देही जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकामा बुवा मातृका प्रसाद यादव र आमा रिता देवि यादवको कोखबाट जन्मनु भएकी डा.यादव समाज सेवा र साहित्यमा रुचि राख्दा राख्दै पनि चिकित्सा क्षेत्रलाई अंगालेर तराई मधेसमा महिलाहरुको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा सेवा प्रदान गर्दै आउनु भएको छ । उहाँ संग महिलाका स्वास्थ्य समस्याकाबारेमा अखबार न्युज सहकर्मी रितु सुनारले गरेको कुराकानी- सम्पादक ।
स्वास्थय क्षेत्रमा महिलाका धेरै समस्याहरु छन् भनिन्छ , के के हुन महिलाका स्वास्थय समस्याहरु ?
अहिले समर्गमा हेर्दा स्वास्थय क्षेत्रमा महिलाका मात्रै समस्या नभएर सबैका समस्याहरु रहेको देखिन्छ । यद्यपी महिलाहरुको सम्बेदनशिल अंगबाट स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुने भएकाले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्य समस्या बाहिर ल्याउन दु :ख मान्ने अवस्था अहिले पनि छ । तपाईले भने जस्तै महिलाका समस्याहरु त धेरै छन् , तर पछिल्लो समयमा महिलामा पाठेघरको समस्या चुनौति पुर्ण बन्दै गएको छ । समस्या त धेरै छन् , तपाई स्वास्थ्यको कुरा गर्नु हुन्छ भने नेपालको दुर दराजका जन्ताले अहिले पनि राम्रो चिकित्सकबाट सेबा पाउने अवस्था छैन । सबै चिकित्सकहरु शहर केन्द्रित भएको अवस्था हो ।
तपाई स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुनु हुन्छ, स्वास्थय परिक्षण गर्न आउने महिलाहरुमा प्राय: कस्ता समस्या बढि देखिन्छन् ?
हाम्रो समाज धेरै कुरामा अगाडि बढी सकेको अनुभुति मैले गरेको छु, तर पनि यसो हेर्दा प्राबिधिक कुरामा अगाडि त बढ्यो तर हाम्रो सोचमा अहिले पनि हामी धेरै पछाडी भएको जस्तो लाग्छ ।
महिलाहरुले पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा पाइला टेकी सक्नु भए जस्तो देखिन्छ, केही हद सम्म सबै कुरामा महिलामा हौसाला बढेको छ, तर ती गर्ने एक दम न्यून छन् । अझै भन्ने हो भने, शिक्षित महिला भए पनि खुलेर समयमा आफ्नो स्वस्थ सम्बन्धि कुरा हरु न भन्ने कारणले झन जटिलतामा पुगेर थाहा हुदा स्वम महिला र उहाँको परिवारलाई गाह्रो हुन्छ, चाहे त्यो आर्थिक या मानसिक रुपमा समस्या निम्तयाउँछ । प्राय आउने महिलामा त यौन जन्य रोग नै बढी छन् , जुन या त पुरुषबाट महिलामा सरेको हुन्छ या त महिलाले महिनाबारी भयको समयामा सर्सफाइमा ध्यान नदिएको कारणले हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा हेर्दा सर्भाइक्ल क्यान्सर (cervical cancer) पनि छ । सुरुमै जाँच (screening) गरेर त्यही अनुसरको उपचार गरन सकिन्छ । महिलाको यौन अंगवाट आउने सेतो पानी जुन येउटा यौन जन्य रोग हो, त्यो समयमा उपचार न गर्दा पछि pelvic inflammatory disease गरेर बच्चा बस्दा, पाठेघर बाहिर बच्चा बस्ने (ectopic pregnancy) गराउने मुख्य कारण बन्न सक्छ । त्यस्तो पाठेघरमा नबसि नलिमा या अन्य ठाँउमा बस्दा त्यो फुटेर महिलाको ज्यान जान सक्ने खतरा हुन सक्छ ।
त्यस्तै महिलाहरुले गर्भधारण गर्दा, सुरु देखी स्वस्थ्य परिक्षण गर्ने चलन नेपालीहरुमा कम देखिन्छ । सुरुमा (video x-ray) गराउने देखी रगत परिक्षण गरेर महिला र बच्चाको स्वस्थ्य सम्बन्धी सब थाहा पाएर तेहि अनुसर के गर्दा राम्रो हुन्छ भनिन्छ, तर अहिले ठाँउ ठाँउ मा सरकारी देखी निजी अस्पताल हुँदा पनि परिक्षण नगराउने, अचानक बच्चा जन्मन्छ रगत अल्पता भयेर बचाउनैे नसक्ने अबस्थामा बल्ल बिरामी अस्पताल सम्म आइपुग्नु विडम्बनाको कुरा हो ।
महिलाहरुलाई यस्ता समस्या बढि देखिनुको कारण के होला ?
यहाँले सोधदै गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा चेतनाको अभाव हो । किन भने हाम्रो समाजमा आफ्नो समस्या अरुलाई भन्न नसक्ने आफै संग दवायर राख्ने प्रचलन धेरै छ । अर्को कुरा परम्परागत सोचका कारणले पनि महिलाहरु खुलेर प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।
खासगरि कुन समुदायका महिलाहरुमा यी समस्याहरु देखा पर्छन ? समाधनका केही उपायहरु ?
शैक्षिक क्षेत्रमा पँहुच भयका महिलाहरु त आफ्नो विषयमा विज्ञ हुन्छन् । नभय सर सल्लाह लिन पनि डराउदैनन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भय आफै सचेतना अपनाएर चिकित्सककोमा पुग्छन् । तर ग्रामिण क्षेत्रका महिलामा यस्तो समस्या बढि देखिन्छ । उनीहरुले आफ्ना सबै कुरा नत श्रीमानलाई भन्न सक्छन् न परिवारका सदस्यहरुलाई नै भन्न सक्छन् । त्यो पीडा आफै भित्र लुकाएर राख्नु गंम्भिर कुरा हो ।
भनिन्छ महिलाहरु आफनो स्वास्थय समस्याको बारेमा परिवारमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् यहाँ आउने महिलाहरुमा स्वास्थय सम्बन्धि कस्तो धारणा व्यक्त गरछन् ?
विषय गंभिर हो, अहिले पनि हामी महिनावारी हुँदा खुलेर भन्न सक्दैन्न् , भने पछि अन्य स्वास्थ्य समस्या त पर को कुरा हो । हामीलाई थाहा छ तर पनि थाहा हुँदा हुँदाहुदै पनि गंभिर बनेका छैनौ । तर जब गह्रौ पर्छ त्यस पछि फेरि कि भगवानको लिला कि डाक्टरले केही गरेन्न भन्छौ । परिवर्तन आफैबाट सुरु गरौ जस्तो लाग्छ । हाम्रो समाज संग पनि धेरै कुरा जोडीन्छ महिलाले आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न नसकेको विषय जटिल विषय हो,भन्ने लाग्छ तर हामीले सबै कुरामा परिवारमा सहज गराउनु पर्छ ।
महिलाहरुले आफनो स्वास्थयलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छन ?
स्वास्थ्य रहन धेरै विषयमा गंभिर हुन आवश्यक छ । सरसफाई गर्ने, राम्रो खाने जुनसुकै अवस्थामा भए पनि स्वास्थ्य रहनकालागी खान पान र सरसफाईमा गंभिर बन्न जरुरी छ ।
गर्भवति हुदा होस या बच्चा जन्माउदाँ तिन देखि पाँच बर्षको अन्तरमा बच्चा जन्माउनु बच्चा जन्माइ सके पछी स्थायी वा अस्थायी परिवार नियोजको साधान प्रयोग गर्नु, समसय समयमा आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अगाडी बढ्नुले स्वास्थ्य समस्यामा कमि आउछ ।
तराई क्षेत्रका महिलाहरुमा स्वास्थ्य सम्बधी बढि समस्या देखिन्छ भनिन्छ नी, त्यस्तो हो त ?
तपाईलाई त्यस्तोे लाग्न सक्छ, तराईका महिलाहरुमा स्वास्थ्य सम्बधी बढि समस्या देखिन्छ भन्ने । तर म पहाडी जिल्लाहरुमा पनि काम गरेको मान्छे महिलाको स्वास्थ्य समस्या भनेको पहाड तराई भन्ने हुन्न । यसरी बुझनुस समस्या भनेको समस्या हो । त्यो सम्पन्न राष्ट्रको विपन्नको तराई को पहाड को भन्ने हुदैन ।
अन्तमा तपाई स्वास्थय समस्यासङ जुदिरहेका महिलाहरुलाई के सल्लाह सुझाब दिन चाहानुहुन्छ ?
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या जसलाई पनि पर्छ तर तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल या प्राइभेट क्लिनीकहरुमा उपचार र राम्रो सल्लाहलिनु आवश्यक हुन्छ ।
समयमा उपचार गरे पछि जस्तो जटिलताबाट पनि बच्न सकिन्छ । उपचार गरेपछि निको नहुने रोग कमै छन् । त्यसैले समय समयमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यद्यपी महिलाहरुले गर्भवती भएको अवस्थामा समय समयमा जाँच गराउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसमाथी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले गर्भवति गराउनकोलागी त निशुल्क जाँच गराउनुका साथै सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्माउदा पैसा दिने सम्मको अवस्था छ । त्यसैले स्वस्थ रहौ,स्वास्थ्य बनौ, समस्या भए चिकित्सक संघ सल्लाह गरौ सबैमा सधै सधै स्वास्थ्य रहने शुभकामाना ।